manokana, dia hikarakara hetsika « Jeux Corporatifs » antsoina hoe : eLalao ho tontosaina etsy amin’ny kianjan’i Mahamasina amin’ny 20 sy 21 jolay 2019 izao ny orinasa eTehc tarihan’ny Taleny Razafindramalo Tahina. Nambaran’ity talen’ny eTech ity tamin’ny fitafana tamin’ny mpanao gazety teny Anosivavaka fa : « tsy vitan’ny hoe fiatrehana fifaninanana ara-panatanjahantena fotsiny ny “Jeux Corporatifs” fa natao hanehoan’ireo orinasa mpandray anjara ny fifankatiavana sy ny fifanajana ary ny “excellence” ananan’izy ireo tsirairay avy ao anatin’ny fifampikasohan’ny samy mpiasa mivantana ». Mpiasa hifaninana miisa 1000 avy amina orinasa 50 no handrasana handray anjara amin’ny taranja 11 hisy ao amin’ity hetsika eLalao ity dia ny Basket-ball, Foot-ball, Volley-ball, Lawn tennis, Tennis de table, Relais, Pétanque, Rock&Roll, Zumba, Échecs ary ny Belote . Hisy ny « Village de Jeux » hametrahan’ireo orinasa mpandray anjara ny fitaovan’izy ireo sady hampahalalany ny momba azy koa. Ny sasantsasany amin’ireo mpiara-miombon’antoka kosa dia hanana tranoheva hampirantian-dry zareo ny zavatra ataony. Hisy ny toeram-pisakafoana sy fialana hetaheta hosahanin’ireo matihanina amin’izany .
Sabotsy 20 jolay 2019 :
08h00 : Fanokafana ofisiaoly (filaharana sy kabary)
08h30 : Fanentanna Zumba
08h45 : Fanombahan’ireo fifaninanana
17h00 : « Soirée d’ambiances »
Alahady 21 jolay 2019 :
8h00 : Tohin’ny fifaninanana (dingana famaranana)
15h00 : Famaranana sy fanolorana amboara